Xog Dhageyso: Madaxda DF oo bilaabay in Qaab Yaab leh u qaataan Lacagaha Laaluushka iyo Hadalheynta oo noqotay…. | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
Xog Dhageyso: Madaxda DF oo bilaabay in Qaab Yaab leh u qaataan Lacagaha Laaluushka iyo Hadalheynta oo noqotay….
Warar yaab leh ayaa laga helayaa Madaxda Dowlada Soomaaliya oo bilaabay qaab yaab leh in laaluushka u qaataan Maadaama Xukuumada R/wasaare Kheyre ay ku dhawaaqday in tilaabo cad laga qaadi doono cidii lagu helaa Musuq-maasuq.
Sidoo kale R.wasaare kheyre iyo Wasiirka Maaliyada ayaa sameeyay xubno dowlada ka tirsan hadana ah kuwo si hoose u gudbiya Xogta Madaxda Laaluushka qaata.
Xafiisyada Madaxda Dowlada Soomaaliya ee Magaalada Muqdisho sida Xafiisyada Wasaaradaha qaar, Xafiisyada qaabilsan dhanka garsoorka iyo Maamulka Gobalka Banaadir ayaa laga dhex bilaabay qaadashada Laaluushka oo nooc cusub ah.
Baaritaan iyo dabagal aan sameynay ayaan ku ogaanay in Madaxda dowlada Marka ay kuu fududeeyaan Howlaha kaaga xeran dowlada ama si waafaqsan nidaamka shaqada ay kuugu qidmeeyaan islamarkaana ay kaa rabaan Laaluushka balse hadii aad diido culeys lagaa saarayo howlihii aad u baahneyd.
Madaxda ayaa bilaabay in Lacagta laaluushka aysan ku qaadan qaabka EVC-PLUS-ka. oo ah adeeg Mobile oo Lacagta leesku marsiiyo iyagoo ka baqaya in dabagal lagu sameeyo kadibna Xabsiga la dhigo waxaana taas badalkeeda ay kaa rabaan in aad dollar uga soo dhigto.
Sidoo kale Baarista waxaan ku ogaanay in Qaabka Canshuurta dowlada hoose loo qaado uu ka jiro musuq maasuq weyn sidoo kale waxaa naloo xaqiijiyay in dhanka Maxkamadaha dalka ay yihiin halka ugu daran.
Dhawaan ayeey aheyd markii Sarkaal ka tirsan Ciidamada ilaalada wadooyinka loo xeray Lacag laaluush ah uu qaatay isagoo adeegsanaya awood dowladeed waxaana kashifay Nin shacabka oo soo ku shaaciyay baraha bulshada internetka.